ओलीले विद्यालाई राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिन चाहेपछि झलनाथ खनाल आगो, के भने खनालले ? – www.agnijwala.com
ओलीले विद्यालाई राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिन चाहेपछि झलनाथ खनाल आगो, के भने खनालले ?
झापा, २१ पुस– एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफू कसैलाई नमस्कार गरेर राष्ट्रपति बन्ने पक्षमा नहरेको बताएका छन् ।
यद्यपि खनालले राष्ट्रपतिको अफर आए अस्वीकार भने नगर्ने स्पष्ट गरे । ‘राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीका लागि आग्रह गरिए म जिम्मेवारी बोक्न तयार छु’, बिहीबार झापाको बितौमोडमा सञ्चारकर्मीसँग खनालले भने, ‘तर राष्ट्रपति बनाइदेऊ भनेर कसैलाई नमस्कार गरेर हिंड्दिन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनाल राष्ट्रपतिको रेसमा छन् । अघिल्लोपटक विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बन्ने बेलामा पनि उनले इच्छा प्रकट गरेका थिए । तर, एमाले नेतृत्वले उनको चाहना पूरा गरेन । यसपटक पुनः भण्डारीले दोहोरिने चाहना व्यक्त गरेको समाचारहरु आइरहेका बेला खनालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । खनालले स्पष्ट रुपमा कसैको नाम उल्लेख नगरे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ लक्षित गर्दै ‘नमस्कार’ नगर्ने बताएका हुन् ।
ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक अरुको हकमा वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै निरन्तरता दिने बताइसकेका छन् । फरक प्रसंगमा उनले ताजा जनादेश आइसक्दा पनि सत्ता छाड्नुको साटो सरकारमा बसेर जथाभावी निर्णय गर्ने र सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरे ।яндекс директ вход в личный кабинетКоммерческаяcomasianпрограмма для определения позиций сайта в поисковикахтитановая сковорода